Akara ọla edo na ụlọ akwụkwọ - ọnọdụ
Nne Oge ntorobịa
Ruo n'oge na-adịbeghị anya, ememe ngụsị akwụkwọ si n'ụlọ akwụkwọ ahụ nwere nza ọla edo meghere tupu mmadụ abanye n'ọnụ ụzọ ọ bụla mahadum, na-enye ya nnukwu uru na nbanye. Onyeikpe maka onwe gị - onye nwe onyinye a ma ama nwere ike ịbanye na ụlọ akwụkwọ ọ bụla na-abụghị mpi ahụ. Ndị mahadum kachasị mma dị njikere imepe ọnụ ụzọ ha n'ihu ndị ahịa gold na ọlaọcha . Mana nke a mekwara ka ọ bụrụ ọgaranya, n'ihi na ọ bụ ihe na-adọrọ adọrọ ịbanye n'ụlọ akwụkwọ ahụ n'enweghị nsogbu na nyocha. Ugbu a, oge agbanweela, uru ndị dị na n'oge gara aga na onye na-edozi ọlaedo ga-etinye aka na nyocha mmeghe na ihe mgbakwasị ụkwụ. Kedu ihe mere anyị ji chọọ nlele ọla edo ugbu a, gịnị ka ọ na-enye? Ọ bụ ezie na ọ naghị enyere onye nwe ya aka ịchọ ule, ọ na-enye ya ikike ikike tupu ọ bụrụ na ọtụtụ ndị na-abata abanye na ọnụ ọgụgụ nke ọnụ ọgụgụ ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị dị elu nke mmụta dị elu, ndị ndu ha na-enye ndị na-edo ọlaedo aka ikike ịghọ ụmụ akwụkwọ na-enweghị nyocha ọ bụla. Ihe mgbali ọzọ iji gụchaa akwụkwọ na ntụgharị ọla edo nwere ike ịbụ n'eziokwu na ndị isi obodo na-akwụghachi ndị na-agụsị akwụkwọ ụgwọ ọrụ n'ụzọ dị otú a na ego ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ onyinye bara uru. Ma, n'ezie, echefula na ụgwọ ọrụ dị otú ahụ ga-abụ ụgwọ ọrụ kwesịrị maka ụmụ akwụkwọ siri ike.
Ọnọdụ maka inweta nrite ọlaedo na ụlọ akwụkwọ
Kedu otu esi enweta nrite ọla edo? Akara gold maka ngụsị akwụkwọ site na ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ, karịa, otu nrite "N'ihi Nchọpụta Ndị Pụrụ Iche Na Ịkụzi" nyere ndị ụmụ akwụkwọ 11 (12) klas ndị nwere afọ isii, afọ na nke ikpeazụ "akara ise" (na Ukraine, "ten", " iri na otu "," iri na abụọ ") na isiokwu niile gụnyere na ọzụzụ ọzụzụ, ma nata otu akara ahụ na njedebe nke steeti (ikpeazụ). Ụmụ akwụkwọ ndị na-enweghị ike inweta nrite ọlaedo, ndị a zụrụ azụ ma ọ bụ nata akara dị mma site na ntinye akwụkwọ nyocha, emeziri iji melite akara. Mkpebi ịnye nza ọla edo ka ụlọ ọrụ nkuzi nke ụlọ akwụkwọ gọọmenti na-eme, ọ na-ejikọta ya na ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ mpaghara ma kwadoro site n'aka onye nduzi ụlọ akwụkwọ.
N'ihi ya, iji bụrụ onye nwe ezi ụgwọ ọrụ a, ọ dị mkpa ime ọtụtụ mgbalị. N'eziokwu, ọ naghị adịrị mfe ịnweta akara ndị mara mma n'isiakwụkwọ niile gụnyere na usoro ọmụmụ akwụkwọ n'oge afọ abụọ nke siri ike (ọmụmụ 10 na 11). Ma ọ bụrụ na onye mmụta ahụ kwenyesiri ike na ya chọrọ ịghọ onye na-edozi ọlaedo, ụzọ ya maka onyinye a kwesịrị ịmalite site na mkparịta ụka na onyeisi ụlọ. N'ịkọwa ihe o bu n'obi, onye na-aga n'ihu n'ọdịnihu nwere ohere ọ bụla iji nata nkwado ọzọ site na nchịkwa ụlọ akwụkwọ dịka akwụkwọ enyemaka dị mkpa, akwụkwọ, soro ndị nkụzi na-aga elekere anya. Enwekwu uru na ịchọta nwa akwukwo maka nrite ga-abụ ndụ ndụ nke onye mmụta ahụ: na-ekere òkè na olympiads, nzukọ, asọmpi na ọbụna KVNs.
Dịka a ga-ahụ site na n'elu, ịnweta akara ụlọ akwụkwọ dị elu bụ nnukwu ọrụ-na-achọ ụgwọ zuru ezu maka usoro mmụta maka ọ dịkarịa ala afọ abụọ. Ọchịchọ ịghọ nwa akwụkwọ mara mma , n'enweghị obi abụọ ọ bụla, dị mma, mana ọ naghị eweta uru bara ụba. N'ihi nke a, ọ ga-aka mma karịa ịchụso mmeri, kama iji dọọ ndị agha aka iji kwadebe maka ịbanye na nyocha nke otu na ịbanye na mahadum.
Ụkpụrụ omume n'ime ogige ahụ
Ihe nkiri Disney maka ndị na - eto eto - Depụta
Ntutu isi maka ụmụ akwụkwọ kọleji
Ọrụ maka ndị na-eto eto 13 afọ
Ejiri ụlọ akwụkwọ na mgbado maka ụmụ akwụkwọ kọleji
Nduzi nlekọta maka ụmụ akwụkwọ sekọndrị
Ogo ole okwu kwa nkeji kwesịrị ịgụ akwụkwọ mbụ?
Ntutu isi maka ụmụ
Ụbọchị nke afọ iri na ụma
Akwụkwọ nke oge a maka ndị nọ n'afọ iri na ụma
Ezigbo akwụkwọ maka ndị na-eto eto
Gopnik - subculture
Kedu ka edere akwụkwọ maka ụlọ akwụkwọ banyere enweghị nwa?
Ihe ndị na-akpali mmasị maka ndị nọ n'afọ iri na ụma
N'olu - ụzọ kachasị mma iji kpochapụ lipoma
Keanu a na-enweghị ihe ọ bụla, ma ọ bụ oge 26 nke mere ka ịntanetị chịkwaa anya mmiri ...
Nri na French site na beef
Ụbọchị nke atọ nke afọ ime - gịnị na-eme?
Kedu otu esi agba ọsọ n'ụzọ kwesịrị ekwesị iji belata ibu?
Ọgwụgwọ na manu oku
Ngwurugwu ọkpụkpụ na aka na oven
Kedu esi gbanye akwa akpụ ụkwụ?
Gloriosa - nlekọta ụlọ
Carrots maka ụkọ ọnwụ
Bura na glycerine maka ụmụ amụrụ ọhụrụ
Ikuku fresheners maka ụlọ
Salad nke ose Bulgarian maka oyi
Kedu calorie ole dị na halva?
Star beauties fought on red carpet Billboard Music Awards-2016
Agwọ maka agwọ ọrịa na cracks
Ihe caloric nke sie buckwheat
Kedu ihe bụ sphagnum e ji mee ihe?
Scythe nke 4 strands